Androany 8 taona lasa izay nampahafantaran'ny Apple ny iPhone | Vaovao IPhone
Tamin'ny andro toy ny androany, fa 8 taona lasa izay, Apple dia nanova ny tontolon'ny telefaona finday sy ny an'ny haitao ary ny informatika amin'ny ankapobeny tamin'ny alàlan'ny fanombohana ny iPhone voalohany. Tsy io no finday avo lenta voalohany fa tena izy ilay iray manamarika ny làlana ho an'ny mpamokatra sisa mandra-pahatongan'ny zavatra fantatsika ankehitriny. Na eo aza ny zava-misy fa isan-taona manodidina izao dia hita fa navoaka tamin'ny bilaogy manokana rehetra ny vaovao, ary isan-taona dia hitako ilay horonantsary Keynote nanoloran'i Steve Jobs ny iPhone tany am-boalohany tamin'ny fomba iray izay azony natao ihany, tsy mba leo ny voalohany aho. "Epic" 7 minitra nanolorany ny fitaovany voalohany. Izany no antony anoloranay anao ny Keynote feno, tsy misy fanapahana, ho an'ireo rehetra izay maniry ny hahatadidy izany na hahita azy voalohany.
Andro iray niandrasako roa taona sy tapany izao. Matetika dia misy vokatra vaovao miseho izay manova ny zava-drehetra. Tena sambatra ianao raha mandray anjara amin'ny iray amin'ireto vokatra ireto, fara fahakeliny, amin'ny asanao. Apple dia tena sambatra tokoa, nahavita nanolotra vokatra marobe amin'ity karazana ity.
Tamin'ny 1984 dia natolony ny Macintosh, izay tsy vitan'ny nanova an'i Apple fotsiny, fa nanova ny sehatry ny solosaina iray manontolo.
Tamin'ny 2011 dia natolotray ny iPod voalohany, izay tsy vitan'ny nanova ny fomba fihainoana mozika fotsiny fa nanova ny indostrian'ny mozika iray manontolo.
Androany dia manolotra vokatra revolisionera telo karazana izahay. Ny voalohany, iPod misy efijery lehibe sy fanaraha-maso mikasika. Ny faharoa, finday revolisionera. Ny fahatelo, fitaovana amin'ny Internet. IPod, telefaona ary fitaovana Internet… Azonao izany?
Ireo ny tenin'i Steve Jobs nanolotra fitaovana iray izay tsy ela taorian'izay dia nanjary loharanom-bola lehibe ho an'ny orinasa, izay mamaky firaketana isan-taona, ary izy io no referansa sy fahavalo hikapoka ny ampahan'ny mpamokatra finday avo lenta. Ary aza adino fa io no mpialoha lalana ny takelaka ankafizintsika indrindra, ny iPad.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » 8 taona lasa izay androany Apple dia nanolotra ny iPhone
Ahoana ny fampidinana ny fampiharana Waterlogue maimaim-poana
Lockinfo 8 Videoreview: hatsarao ny efijery fanidiana ny iPhone (Masoandro)